OPPO R11S နှင့် R11S Plus: OPPO မှစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းသစ်နှစ်ခု Androidsis
OPPO R11S နှင့် R11S Plus: OPPO မှစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းသစ်နှစ်ခု
OPPO, တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ, စမတ်ဖုန်းလောကသို့ပိုမိုတိုးပွားလာနေသည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် OPPO R11S နှင့် OPPO R11S Plus အကြောင်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်မယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်စမတ်ဖုန်းအသစ်နှစ်လုံး။
ကစားခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနှင့်လေးလံသောအက်ပ်များကိုဖွင့်ပါ၊ ၎င်းသည်ပြaနာမဟုတ်ပါ အပြိုင်အဆိုင်များသောစမတ်ဖုန်းစျေးကွက်တွင်နေရာယူရန် OPPO ဆိပ်ကမ်းအသစ်များနှင့်အတူ။
ဤမော်ဒယ်လ်အသစ် ၂ ခု၏ရှေ့ပြေး OPPO R4 ကိုတင်ဆက်ပြီးမှ ၄ လသာကြာခဲ့သည်။
OPPO R11S နှင့် OPPO R11S Plus နှစ်ခုလုံးကိုယခုနိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင်ကြေငြာခဲ့သည် အသုံးပြုသူများကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံနှင့်ပံ့ပိုးပေးရန်ကတိပေးသည်။
1 OPPO R11S နှင့် OPPO R11S Plus အချက်အလက်ဇယား
2 OPPO ၏လောင်းကြေး - ၆ "နှင့် ၆.၄" AMOLED ဖန်သားပြင်
3 Snapdragon 660. OPPO R11 နှင့်အတူတူဖြစ်သည်
5 ဘက်ထရီ - OPPO R11S နှင့် OPPO R11S Plus အသစ်၏နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခု
6 Android 7.1.1 Nougat ။ အဲဒါလွဲချော်လို့မရဘူး!
OPPO R11S နှင့် OPPO R11S Plus အချက်အလက်ဇယား
မျက်နှာပြင်6"18:9(2160 x ကို 1080p) AMOLED FullHD + 6.4 "18:9(2160 x ကို 1080p) AMOLED FullHD +
လုပ်ငန်းစဉ် Snapdragon 660 Snapdragon 660
GPU ကို Adreno 512 Adreno 512
ရမ် 4GB 6GB
ချမ်ဘာ နောက်ဘက် - 16MP + 2MP (f / 1.7 +f/ 1.7) 6P မှန်ဘီလူးနှင့် 2x zoom ပါ ၀ င်သည်။ ရှေ့: 20MP,f/ 2.0 နောက်ဘက် - 16MP + 2MP (f / 1.7 +f/ 1.7) 6P မှန်ဘီလူးနှင့် 2x zoom ပါ ၀ င်သည်။ ရှေ့: 20MP,f/ 2.0
ဘက်ထရီ VOOC အမြန်နှုန်းဖြင့် 3205mAh VOOC အမြန်နှုန်းဖြင့် 4000mAh
သိုလှောင် 64 GB ကို 64 GB ကို
OS Android 7.1.1 Nougat Color OS ၃.၂ Android 7.1.1 Nougat Color OS ၃.၂
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် 155.1 x 75.5 x ကို 7.1mm 153g 164.8 x 80.2 x ကို 7.3mm 182g
လက်ညှိုးဖတ်ဖတ် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့
OPPO ၏လောင်းကြေး - ၆ "နှင့် ၆.၄" AMOLED ဖန်သားပြင်
OPPO အသစ်တွင်တွေ့နိုင်သည့်အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲတွင် OPPO R6S အတွက်ဖန်သားပြင် ၆ ခုနှင့် OPPO R11S Plus အတွက် ၆.၄ မျက်နှာပြင်များသည်၎င်းကိုခေါင်းစဉ်ပေးသည် လက်ကမ်းစာစောင်များ ဒီနှစ်ခုကုမ္ပဏီကြီး။
ဤရွေ့ကား 18:9format နဲ့ AMOLED display ကိုအသုံးပြုသောစမတ်ဖုန်းကလပ် join ။ စျေးကွက်ထဲရှိအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းများနှင့်အဆင့်မြင့်ဖုန်းများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။
Snapdragon 660. OPPO R11 နှင့်အတူတူဖြစ်သည်
OPPO သည် Qualcomm Snapdragon 660 processor ကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် OPPO R11 မှာတွေ့ရတာကအဲဒါကိုရည်ရွယ်ထားပေမဲ့၊ အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းတွေမှာသူတို့ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒီ SoC မှာ Kryo 260 CPU ကိုတွေ့တယ် ၂.၂ GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် Cortex-A73 Core လေးခုနှင့် ၁.၈ GHz အမြန်နှုန်းတွင် Cortex-A2,2 Core လေးခုပါရှိသည်။ သူ့အား 53 cores ၏နောက်ဆုံးရလဒ်ပေးသည်။
လည်း, Adreno 512 GPU နဲ့ပေါင်းစပ်ထားပါတယ် ဂရပ်ဖစ်၊ ရုပ်ရှင်နှင့်မိုးသည်းထန်စွာသောဂိမ်းများကိုကစားရန်။
OPPO သည်ကမ္ဘာ့စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင်၊ စမတ်ဖုန်းရွေးချယ်ရာတွင်ကင်မရာများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်.
ဒါကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက် OPPO R11 ၏တူညီသောလိုင်းကိုလိုက်နာနေပြီးဘာလဲ။ အရူးရှေ့ကင်မရာပါ ၀ င်သောနောက်ဘက်ကင်မရာပါ ၀ င်သည်။
20MP ရှေ့ဖက်တွင်f/ 2.0 aperture ပါ ၀ င်ပြီး 16MP + 2MP dual အနောက်ကင်မရာနှင့်ကင်မရာတစ်ခုစီတွင်f/ 1.7 aperture ပါရှိပါသည်။ OPPO သည်အရည်အသွေးကောင်းသည့်ဓာတ်ပုံများကိုကတိပေးသည် သငျသညျသံသယမရှိဘဲ, သငျသညျအမြားဆုံးလိုအပျသောအခြိနျကာလ၌သင်တို့ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားစွန့်ခွာမည်မဟုတ်ကြောင်းသော
ဘက်ထရီ - OPPO R11S နှင့် OPPO R11S Plus အသစ်၏နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခု
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဂိမ်းကစားခြင်း၊ လျှောက်လွှာတင်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ကြည့်ခြင်းစသည်တို့သည် OPPO R3250S အတွက် 11 mAh ဘက်ထရီနှင့် OPPO R4000S Plus အတွက် 11 mAh နှင့်ပြwithနာမရှိပါ။
ဒါကအလွယ်တကူပေးတယ်၊ အက်ပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင် ၀ င်ရောက်သုံးစွဲနိုင်ရန်တစ်နေ့လုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်.
Plus အား VOOC flash မြန်သောအားသွင်းနည်းပညာနှင့်အတူ OPPO သည်ငါးမိနစ်ခန့်အားသွင်းချိန်နှစ်နာရီကြာအသုံးခံမည်ဟုကတိပေးသည်.
Android 7.1.1 Nougat ။ အဲဒါလွဲချော်လို့မရဘူး!
Android N သည်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော Google ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် OPPO terminal အသစ်များနှင့်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းဖုန်းများအနက်မှအများဆုံးရရှိရန်ကတိပေးသည်။
ဤ OPPO terminal အသစ်အသစ်များသည် Android Oreo သို့မကြာမီ update ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း OPPO terminal အသစ်များတွင် 4G LTE ဆက်သွယ်မှု၊ microUSB ထည့်သွင်းမှု၊ နားကြပ်များအတွက် 3.5 mm jack port၊ nanoSIM နှင့် Wifi တို့ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
လည်း ရှိလိမ့်မည် လက်ဗွေဖတ်စက် ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုလုံခြုံစွာသော့ဖွင့်ရန်။
OPPO R11S ကိုယူရို ၃၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး OPPO R2999S Plus သည်ယူရို ၃၆၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၄၈၉ ယူရိုဖြစ်သည်။
ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုစလုံးကိုယခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရောင်းချမည်ဖြစ်သည် နှစ်ခုနှင့်အရောင်ဗားရှင်း: ရွှေနှင့်အနက်ရောင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » OPPO R11S နှင့် R11S Plus: OPPO မှစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းသစ်နှစ်ခု